Fanamby ho an'ny Airbus | Vaovao momba ny dia
Nosoratan'i Daniel Michaels
TOULOUSE, France - Ny mpitantana ny famokarana AirbusTom Williams dia nandany ny dimy taona lasa tamin'ny fanamboarana ny famokarana ho an'ny mpanamboatra fiaramanidina eropeana. Ankehitriny, rehefa nanemotra na nanemotra ny baikon'izy ireo ny kaompaniam-pitaterana dia tsy maintsy manimba ny fifandanjana sarotra amin'ny fanitsiana ireo ozinina amin'ny sehatra vaovao nefa tsy manimba ny vintana fanarenana.
Nanambara ny Airbus tamin'ny zoma fa nahazo baiko ho an'ny fiaramanidina 16 fotsiny izy tamin'ny volana martsa, raha oharina amin'ny kaomandy 54 tamin'ny martsa 2008 sy 37 tamin'ny taona lasa. Manantena ny handray ny kaomandy vaovao vaovao 300 ka hatramin'ny 400 fotsiny ny orinasa amin'ity taona ity raha oharina amin'ny 777 tamin'ny taon-dasa, izay tsy maintsy esorinay ny fanafoanana ny taona lasa.
Ny fananganana fiaramanidina dia sarotra tokoa ka ny fanalefahana ny famokarana dia mety ho sarotra toy ny fanafainganana azy io. Ny zavamaniry izay nohamarinin'i Williams farany ho an'ny famokarana haingana dia tokony hahena ambany nefa tsy avela hitombo be ny vidiny raikitra.
Mpamatsy am-polony maro an'isa Airbus, izay mamatsy karazana singa rehetra, dia tsy azo avela amina trano fitahirizana entana feno faritra na orinasa tsy mijanona, na ho hitan'izy ireo fa malemy loatra izy ireo rehefa maka ny fangatahana.
Ankoatr'izay, ny fandroahana mpiasa mahay dia mety hiteraka fahaverezan'ny talenta izay mety hisakana ny fanarenana amin'ny farany. "Mandany fotoana be dia be izahay amin'ny fampiofanana ireo mpiasanay izay mamolavola sy manangona fiaramanidina, noho izany dia tokony hitandrina isika", hoy i Williams, filoha lefitra mpanatanteraka Airbus ho an'ny fandaharana, nandritra ny tafa nifanaovana tamin'ny foiben'ny orinasa. Hatramin'ny 2003, Airbus dia nampitombo ny famokarana fiaramanidiny hatramin'ny 60%, ka nahatratra 483 ny fitaterana tamin'ny taon-dasa.
Na izany aza, tamin'ny volana oktobra, ny vondrona ny European Aeronautic Defense & Space Co. (EADS) mitazona drafitra hampitomboana ny fitomboan'ny famokarana ary tamin'ny volana febroary dia nilaza fa hampihena ny fandefasana ireo maodely lalantsara malaza amin'ny 36 ka hatramin'ny 34 isam-bolana. Nanambara ihany koa izy fa handinika ny fahatapahana bebe kokoa.
Airbus sy ny Amerikanina mpifaninana aminy Boeing Co., izay nanambara ny fandroahana mpiasa 4.500 XNUMX kanefa hitazona ny vokatra hamokatra amin'ity taona ity, dia maneho fiheverana am-pitandremana kokoa noho ny orinasa indostrialy lehibe manoloana ny krizy manerantany. United Technologies Corp., izay mahatonga ny fitaovana aerospace, ny aircon ary ny ascenseur, dia nilaza tamin'ny volana martsa fa hampihena ny 5% ny mpiasa ao aminy, na ny asa 11.600 XNUMX. Caterpillar Inc. Nanambara fialan-tsasatra maherin'ny 20.000 izy, ary mampihena ny famokarana sy ny fanala ny asan'ny orinasa sasany.
Ny Airlines sy ny solontenan'ny indostria dia maminavina fa ny Airbus sy ny Boeing dia mila manapaka ny famokarana amin'ny fomba mahery vaika mba tsy hanao fiaramanidina izay tsy mahita mpividy. Douglas Harned, mpandinika fiaramanidina ao Sanford C. Bernstein & Co. any New York, dia naminavina tamin'ny tatitra iray navoaka tamin'ny volana lasa teo fa tokony hanapaka ny fizarana azy ireo ny Airbus sy Boeing amin'ny herintaona amin'ny 20% amin'ny tetikasan'izy ireo ankehitriny. Ny orinasa izay manofa fiaramanidina vao haingana dia nangataka tamin'ny mpanamboatra roa hanapaka ny famokarana mba hialana amin'ny fivarotana tsena sy hampihenana ny sandan'ny fiaramanidina amin'ny volavolan-dry zareo.
Ny solontenan'ny Airbus sy Boeing dia nilaza fa tsy mitovy ny fiaramanidina fananganana satria ny fiaramanidina izay mitentina eo anelanelan'ny $ 50 tapitrisa ka $ 300 tapitrisa, dia maharitra herintaona vao hamokarana. Vokatr'izany dia mivoatra miandalana ny tsingerina.
Ny zavatra niainan'i Boeing dia nampiseho fa ny fihodinan'ny famokarana tampoka dia mety hanimba. Folo taona lasa izay, nanandrana nampiroborobo ny vokariny ny mpanamboatra fiaramanidina tao anatin'ny fotoana fohy, saingy niharan'ny tsy fahampiana ampahany sy tsy fahampian'ny mpiasa mahay. Ny famahana ny olan'ny famokarana dia niteraka fatiantoka lehibe ho an'i Boeing, na dia namoaka fiaramanidina marobe aza. Nanomboka teo dia samy nanandrana nanalavitra ny fitsambikinana lehibe tamin'ny famokarana i Boeing sy i Airbus.
Ny lalàna momba ny asa eropeana dia manakana ny Airbus tsy handroaka ireo mpiasa amin'ny alàlan'ny Boeing mora. Noho io antony io, tato anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny mpanamboatra eoropeanina dia nanakarama mpiasa tapa-potoana sy mpiasa voafaritra betsaka kokoa. Nilaza i Williams fa amin'ny fampiasana matetika ireo mpiasa ireo dia azonao atao ny mampihena ny vokatrao amin'ny 20% nefa tsy miala amin'ny mpiasa maharitra. Ny fihenam-bidy voalohany napetrak'i Williams tato anatin'ny volana vitsivitsy dia ny fiovan'ny ora fanampiny, izay navelan'ny Airbus hamaly ny fangatahana mafy, hoy ny tompon'andraikitra 56 taona, 37 amin'izy ireo natokana ho an'ny fanamboarana motera, motera fiaramanidina ary fiaramanidina.
Fanamby lehibe kokoa ny fitantanana mpamatsy. Maherin'ny 80% ny sandan'ny fiaramanidina Airbus tsirairay avy amin'ny orinasa hafa, hoy i Louis Gallois, CEO an'ny EADS. Ny sasany amin'ireto mpamatsy ireto dia kely kokoa ary malemy ara-bola noho ny Airbus ary hanana fotoana sarotra hiatrehana ny krizy, hoy ny mpitantana sasany.
loharanom-baovao: WSJ Amerika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » fiaramanidina » Fanamby ho an'ny Airbus